Heshiisyada Ilaa Hada Ka Dhacay Suuqa Kala Iibsiga Ee Maalinta Deadline Day-ga
[ June 26, 2022 ] Thomas Tuchel oo la xiriiray xiddiga Manchester City ee Raheem Sterling si uu ugu biiro Chelsea.	Wararka Ciyaaraha
[ June 26, 2022 ] Wakiilada Neymar oo wadahadalo kula jira Kooxda Juventus	Wararka Ciyaaraha
[ June 26, 2022 ] Xavi oo si shaqsi ah uga codsaday Dembele inuu sii joogo Barcelona.	Wararka Ciyaaraha
[ June 26, 2022 ] Antony oo seegay tababarka Ajax iyadoo lala xiriirinayo Manchester United	Wararka Ciyaaraha
[ June 26, 2022 ] Daafaca Brighton Cucurella ayaa meesha ka saaray in Man City ay la soo wareegi karto	Horyaalka Ingiriiska
HomeWararka CiyaarahaHeshiisyada ilaa hada ka dhacay Suuqa kala iibsiga ee Maalinta Deadline Day-ga
February 1, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka France, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Italy, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Suuqa kala iibsiga ayaa soo xirmaya maanta iyadoo durbaba la sameeyay saxiixyo badan halka la filayo in saxiixyo kale la dhameystiro ka hor inta uusan caawa suuqa xirmin.
Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa liiska ciyaartoyda lala wareegay maanta oo Deadline Day ah.
* Barcelona ayaa la soo wareegtay daafaca reer Senegal iyo kooxda Granada Alpha Dionkou, waxay kula soo wareegeen heshiis amaah ah.
* Arsenal ayaa dhameystirtay saxiixa 23 jirka daafaca kooxda horyaalka Mareykanka ee Colorado Rapids oo lagu magacaabo Auston Trusty. Waxay u ogolaadeen inuu amaah ugu sii joogo kooxdiisa ilaa iyo 17ka July markaasoo uu u soo wareegayo Arsenal.
* Manchester United ayaa shaacisay hadda in Donny van de Beek uu heshiis amaah ah ugu wareegay kooxda Everton. Heshiiska waa lix bilood oo ku eg xagaaga 2022.
* Villarreal ayaa si rasmi ah u shaacisay inay Giovani Lo Celso kala soo wareegeen kooxda Tottenham. Heshiiska waa mid amaah ah iyadoo uu ka shaqeeyay macalinka Villarreal Unai Emery.
* Newcastle ayaa dhameystirtay saxiixa daafaca Aston Villa Matt Targett oo ay kula soo wareegeen heshiis amaah ah ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareeedkan.
* Xiddigii Tottenham Bryan Gil ayaa heshiis amaah ah ugu wareegaykooxda Valencia inta ka harsan xilli ciyaareedkan. Heshiiska kuma jirto qodob dhigaya inay si joogta ah kula wareegaan kumana jirto qodob u ogolaanaya Valencia inay amaahda dheereystaan.
* Tottenham ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay Dejan Kulusevski ay kala soo wareegtay kooxda Juventus. Waa heshiis amaah hal sanno ah oo ay Tottenham bixineyso 10 milyan euro. Waxaa heshiiska ka mid ah inay Tottenham xiddigaan ku iibsan karto 35 milyan euro xagaaga.
* Xiddigii kooxda Juventus Rodrigo Bentancur ayaa si rasmi ah ugu wareegay kooxda Tottenham. Juventus waxay ku heshay xiddigaan 19 milyan ginni euro halka Tottenham ay bixin doonto sidoo kale lix milyan oo ku xiran qaab ciyaareedkiisa. Kooxdiisa hore ee Boca Juniors waxay qaadan doontaa boqolkiiba 30 lacagta lagu iibiyay.
* Kooxaha Everton iyo Tottenham ayaa heshiis rasmi ah ka gaaray saxiixa Dele Alli. Xiddigaan ayaa si joogta ah ugu wareegaya Everton iyadoo tababare Frank Lampard uu dalbaday.
* Laacibka Juventus horena ugu soo ciyaaray Arsenal Aaron Ramsey ayaa si rasmi ah heshiis amaah ah ugu wareegay kooxda Scotland ka dhisan ee Rangers. Rangers waxay qiyaar u leedahay inay si joogta ah kula wareegto Ramsey xagaaga. Kooxda reer Scotland waxay bixin doontaa mushaharka ciyaaryahanka oo dhameystiran inta uu amaahda ku joogo kooxda.
* Xiddigii hore ee Inter Milan Christian Eriksen ayaa si rasmi ah ugu laabtay Premier League, wuxuu ku biiray kooxda Brentford isagoo xor ah ka dib markii ay iska fasaxday kooxda Talyaaniga xagaagii markii uu wadnuhu istaagay isagoo u dheelaya xulkiisa Denmark.
* Julian Alvarez ayaa si rasmi ah ugu biiray kooxda Manchester City isagoo heshiis gaaraya 17 milyan euro uga soo wareegay kooxda reer Argentina ee River Plate. Man City waxay bixin doontaa 1.5 milyan euro oo dheeri ah oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa.
* Tanguy Ndombele ayaa si rasmi ah uga tagay kooxda Tottenham isagoo amaah ugu biiray kooxda Lyon ee dalka Faransiiska, heshiiska amaahda ayaa ah muddo lix bilood ah. Lyon waxay ciyaaryahanka kula wareegi kartaa 65 milyan euro xagaaga.
* Juventus ayaa tijaabada caafimaadka marsiineysa haaran saxiixeeda cusub Denis Zakaria kaasoo u saxiixay heshiis dhacaya 2026. Juve waxay xiddigaan kala soo wareegtay kooxda Jarmalka ee Borussia Monchengladbach, waxay marka hore siinayaa 5 milyan euro halka seddex milyan euro ay gadaal ka bixin doonaan.
* Romain Faivre ayaa si rasmi ah ugu wareegay kooxda Lyon isagoo ka soo wareegay kooxda Brest heshiis gaaraya 15 milyan euro.
* Liverpool ayaa heshiis amaah ah ku fasaxday daafaca aadka loo qiimeeyo Nat Phillips kaasoo ku biiray kooxda Bournemouth inta ka harsan xilli ciyaareedkan.
* Xiddiga khadka dhexe ee Chelsea Tino Anjorin ayaa amaah ugu biiray kooxda Huddersfield inta ka harsan xilli ciyaareedkan.
Daafaca Brighton Cucurella ayaa meesha ka saaray in Man City ay la soo wareegi karto
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Caawa Oo Sabti Ah 25 June
Xiddiga Gareth Bale oo Heshiis la Gaaray koox aan ka mid ahayn naadiyashii lala xidhiidhinayay
50kii Ciyaartoy Ee Ugu Wanaagsanaa Taariikhda Manchester United Oo La Shaaciyay
Liverpool oo ku Dhawaaqaysa saxiixa xiddiga Real Madrid ee Rodrygo
Ciyaaryahanka Garabka uga ciyaara kooxda Chelsea Hakim Ziyech oo wadahadalo la furay kooxda AC Milan
Kalvin Phillips oo heshiis shaqsi ah la gaaray Manchester City
Manchester City iyo Leeds United oo Heshiis ka gaaray Sharuudo uu qeyb ka yahay Kalvin Phillips
Dalabkii ugu horeeyay ee Arsenal ka gudbisay weeraryahanka Leeds United Raphinha oo la diiday
War Rasmi Ah: Arsenal iyo Man City oo ku heshiiyey qiimaha Gabriel Jesus
Wararkii Ugu Dambeeyay Suuqa Kala Iibsiga Iyo Wargeysyada Maantay Oo Sabti Ah 25 June
Real Madrid Oo Qiimo hoose loogu soo bandhigay Saxiixa Neymar
Bayern Munich oo Diiday Dalabyada Barcelona ee Robert Lewandowski
Tottenham Hotspur oo kula tartameysa Arsenal, Leeds United saxiixa Cody Gakpo?
Daafaca bidix ee Brighton & Hove Albion Marc Cucurella oo hoos u dhigay soojoodintii ahyd inuu adaayo Manchester City
Kooxaha Chelsea iyo Tottenham oo ku hungoobay Doonistoodii difaaca Inter Milan ee Milan Skriniar